Fikarohana momba ny firaisana Ny firaisana amin'ny vatana vaovao ao amin'ny finoana silamo sy silamo - Fikarohana momba ny firaisana amin'ny vatana
Reincarnation sy fotopampianarana Silamo, Karma, Soul Groups & the Koran
Tranga Reincarnation Silamo sy Tiorka fikarohana an'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia & Associates
Mushir Ali, miozolomana, miorina ao amin'ny fianakaviana hindoa iray, saingy mbola mivavaka tahaka ny Miozolomana
Hardevbaksh, Hindoa Thakur, dia novonoina tamin'ny fifandirana sy ny reincarnates ho silamo Sunni izay mitazona toe-tsaina hindoa
Oma Devi, hindoa, mamono tena & miverina amin'ny vatana vaovao amin'ny maha silamo Sunni azy -
Mpamboly islamista, Mehmet Cosmen, Drowns ary Reincarnates miaraka amin'ny Phobia ny Rano
Taorian'ny fianjerana Minibus taorian'ny Ramadany dia nibebaka indray i Abdulkerim Hadduroglu ary tafaverina miaraka amin'ny fianakaviany taloha
Taorian'ny Fahafatesana tao amin'ny fiaramanidina fiaramanidina Tiorka, Ahmet Delibalta dia mamelona indray ny vatana ary mahita ny vadiny taloha
Abt Suzulmus Reincarnates ary mahita ny vadiny taloha
Cevriye Baryi dia tafaraka tamin'ny vadiny taloha
Taorian'i Dying avy any Tetanosy, Nasir Alev no niova ho any Turquie 300 métiers avy tamin'ny fiainany taloha
Reincarnation, Mohammed & ny fananganana ny finoana silamo
Ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao koa dia hita ao amin'ny fampianaran'ny Silamo, fivavahana napetraky ny Mpaminany Mohammed. Teraka tamin'ny taona 570 AD i Mohammed tao amin'ny fianakaviana malaza iray izay mpikarakara ny toerana masina ao Meka, izay fananan-drazak'i Abrahama no nanangana azy. Nanambady ny mpampiasa azy i Mohammed, vehivavy mpandraharaha antsoina hoe Khaadija; Mohammed dia 25 ary Khaadija 40. Ny soratra masina an'ny Islam dia ny Quran (na Koran), izay midika hoe "Recital" na "Famakiana." Raha zohina, ny Quran dia asa voarindra, nampitaina avy tamin'Andriamanitra tamin'ny alàlan'i Mohammed.
Ny fanambarana voalohany nataon'i Mohammed fony izy 40 taona tao amin'ny 610 AD dia nanomboka nanoratra horonantsary izay nanjary CORAN. Rehefa nitombo io fihetsiketsehana ara-panahy io dia lasa olon'ny fanenjehana i Mohammed sy ireo mpanaraka azy ary tsy maintsy nandositra tany Meksa izy ireo tamin'ny 622 AD, nialokaloka tany Medina. Mpitondra sy mpaminany i Mohammed ary nitarika imbetsaka ny vahoakany. Tamin'ny farany dia nentin'i Mohammed niverina tany Lameka ny mpanara-dia, ny toeram-pivavahana silamo ankehitriny.
Fampandrosoana ao amin'ny vatana vaovao ao amin'ny Korany
Betsaka ny andinin-tsoratra masina ao amin'ny Quran izay toa manondro ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray. Andao hodinihintsika ny sasany amin'ireto andalana ireto.
“Ary rehefa potraka tanteraka ny vatany, toy ny akorandriaka trondro, dia mihatsara ny fanahiny amin'ny famotsorana azy, ary mamorona vaovao ho solon'ny… Saron-tava napetraky ny fanahy vetivety ny olona; mitafy ny fotoany avy izy, avy eo atsipy, ary ny iray kosa soloina hisolo azy. ” (1)
“Mamorona zavaboary Andriamanitra ary mamerina azy ireo hatrany hatrany hatrany mandra-piverin'izy ireo any aminy.” (2)
"Ahoana no ahafahanao mandà an'i Allah, izay namelona anao indray rehefa maty ianao, dia hanao anao ho faty indray ary ho velona indray, mandra-piverinao any aminy ihany amin'ny farany?" (3)
"Andriamanitra no nahary anao rehetra, avy eo nanome anao hanina, avy eo hahatonga anao ho faty, ary hitondra anao ho amin'ny fiainana." (4)
"Andriamanitra tokoa no mampisaraka ny voa sy ny vato, mitondra ny velona amin'ny maty; ary Andriamanitra no mamonjy ny maty amin'ny velona. "(5)
Quran & Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny fanambadiana amin'ny vatana vaovao: vondrona fanahy
“Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny fanahy izay manana fifandraisana akaiky dia hiara-hivondrona na dia mihaona amina olona sy anarana vaovao aza izy rehetra.” (6)
Ity andininy farany ity dia iray amin'ireo tiako indrindra toa manondro ny fisian'ny vondron'olona, ​​olona manana fifandraisana ara-pihetseham-po miverina amin'ny fiainana miaraka amin'ireo efa fantany taloha. Ho fanampin'ireo andalana momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, ny Kôrana dia miresaka momba ny karma ihany koa:
"Andriamanitra tsy manery fanahy hanao zavatra mihoatra ny fahaizany: mahazo izay azony izy ary tompon'andraikitra amin'izay sahaza azy." (7)
"Ny olona tsirairay dia hifanatrika amin'ny soa nataony sy ny ratsy nataony." (8)
“Ary hatsangantsika ho mizana ny fitsarana amin'ny andro fanisana. Ary tsy hisy hampijaly olona na amin'inona na amin'inona. Ary na dia lanjan'ny voan-tsinapy iray aza, dia hamoaka azy izahay; ary mahay mandray tsara izahay. ” (9)
"Fa manome fiainana ho an'ny maty izahay, ary milaza an'izay nirahin'izy ireo taloha sy izay navelany taorian'izy ireo; ary efa namboarinay ny zavatra rehetra." (10)
Quran ary ny olombelona manerantany
Ny CORAN dia manana andinin-tsoratra mahatalanjona izay mahatonga ny olona hieritreritra momba ny maha-olombelona manerantany, izay mihena ny fiaraha-monina ara-pinoana ary ny tombontsoan'ny olona dia heverina ho manan-danja indrindra. Diniho ity andininy manaraka ity:
"Marina tokoa, na Silamo izy ireo, na jiosy, na sabianina, na kristiana, ireo izay mino an 'Andriamanitra sy ny andro farany ary izay manao tsara dia tsy tokony hatahorany, ary tsy halahelo izy ireo." (11)
I Mohammed dia nampitandrina ny amin'ny fombafomba ara-pivavahana, izay tamin'ny androny no nikendrena ny Fiangonana Kristiana. Ny teboka nataon'i Mohammed dia Andriamanitra no tokony ho lohahevitra fototra ao amin'ny fiainan'ny olona, ​​fa tsy ireo iraka na mpaminany izay mampita ny tenin'Andriamanitra. Ny "Boky" ao amin'ity andalana ity dia manondro ny Baiboly.
“Ry olona ao amin'ny Boky, aza miroborobo amin'ny fivavahanao, aza milaza zavatra hafa momba an'Andriamanitra afa-tsy ny fahamarinana. Ny Mesia, Jesosy zanakalahin'i Maria, dia irak'Andriamanitra ary Tenin'Andrimanitra nomena an'i Maria ary fanahin'Andriamanitra. " (12)
Jalaluddin Rumi (1207-1273), poety lehibe Islamika sy Sufi. Sufis dia heverina ho mpihazona esoterika ny fahendren'ny silamo, toy ny hoe raisin'ny Kabbalista ho mpihazona ny fahendrena miafin'ny Jodaisma. Rumi nanoratra hoe:
“Toy ny ahitra aho dia nitombo imbetsaka. Tsy nanana endrika mineraly intsony aho ary niaina toy ny zavamaniry. Avy tamin'ny zavamaniry dia nakarina ho biby aho. Avy eo nariako ilay endrika biby ary naka endrika olombelona aho. Fa maninona aho no matahotra sao maty aho? Ho an'ny endrik'olombelona mandalo dia ho hitako ny hidim-baravarana sy ny elatry ny anjely mamirapiratra. Ary avy eo dia ho lasa izay tsy nanan-tsaina velively aho. Avelao aho hitsahatra tsy hisy! Ny tsy fananana dia midika hoe miverina any Aminy fotsiny aho. ” (13)
Ny tombotsoam-piainana, misy ny famoronana ankehitriny ny Rumi. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any: Rumi | Kahalalahin'i Gahlan Reincarnation
Rumi, Reincarnation & Church Christian Father Synesius
Mahaliana ny mahamarika fa nitovy hevitra momba ny lalan'ny evolisiona olombelona ny Ray Kristianina iray, toy ny Rumi. Io fomba fijery io dia manondro fa ny fanjakana sy ny zavamaniry dia afaka manandrana ny fandrosoan'ny fanahy eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny olombelona. Andeha hofakafakaintsika ity teny nindramina manaraka ity avy amin'ny Papa Christian Christian Synesius, evekan'i Ptolemais (370-430 AD), avy amin'ny fampisehoana momba ny nofy:
“Ny filôzôfia dia miresaka momba ny fanahy izay nomanin'ny fifindra-monina. . . Rehefa nidina tety an-tany voalohany izy (ny fanahy) dia niditra tamin'ny fanahin'io biby io toy ny eny ambony sambo, ary amin'ny alalany no ihavian'ny olana. " (14)
Ao amin'ireo andinin-tsoratra ao amin'ny tononkalo Romioma Rumi sy ny Papa Christian Synesius, ny lohahevitra iombonana momba ny evolisiona olombelona amin'ny alàlan'ny fibodoana indray mandeha dia azo raisina ho raisina ary raisina.
Ao amin'ny fizarana amin'ity tranonkala ity mitondra ny lohateny Soul Evolution, ireo olana toy ny hoe ny fanahin'olombelona tonga nofo tao amin'ny fanjakan'ny biby no resahina. Ny fehin-kevitro dia hoe amin'ny vanim-potoana ankehitriny, ny olombelona dia tsy tonga nofo ao amin'ny nofo indray.
1. Joseph Head sy SL Cranston, Reincarnation, Anthology Afovoany Andrefana, Ny trano famoahana Theosophical, 1961, p. 56
2. Joseph Head sy SL Cranston, Reincarnation, Anthology Afovoany Andrefana, Ny trano famoahana Theosophical, 1961, p. 56
3. Quran, Sura 2, The Cow, andininy 28, avy amin'ny The Essential Koran, nataon'i Thomas Cleary, Harper, San Francisco, 1993, p. 89
4. Quran, Sura 11, Roma, andininy 38., Avy amin'ny The Essential Koran, nataon'i Thomas Cleary, Harper, San Francisco, 1993, p. 89
5. Quran, Sura 6, Biby, andininy 95., Avy amin'ny The Essential Koran, nataon'i Thomas Cleary, p. 56
6. Joseph Head sy SL Cranston: Reenkarnation, ary Anthology Afovoany Andrefana, Ny trano famoahana Theosophical, 1961, p. 57
7. Quran, Sura 2, The Cow, andininy 287, avy amin'ny The Essential Koran, nataon'i Thomas Cleary, p. 18
8. Quran, Sura 3, Ny Fianakavian'ny Imraan, andininy 30., Avy amin'ny The Essential Koran, nataon'i Thomas Cleary, p. 22
9. Quran, Sura 21, Mpaminany, andininy 47, avy amin'ny The Essential Koran, nataon'i Thomas Cleary, p. 81
10. Quran, Sura 36, Ya Sin, andininy 12, avy amin'ny The Essential Koran, nataon'i Thomas Cleary, p. 111
11. Quran, Sura 5, Ny latabatra, andininy 69, avy amin'ny The Essential Koran, nataon'i Thomas Cleary, p. 49
12. Quran, Sura 5, Ny latabatra, andininy 171, avy amin'ny The Essential Koran, nataon'i Thomas Cleary, p. 42
13. Jeffrey Mishlove, Fahafantarana ny Fahamarinana, Council Oak Books, Tulsa, Oklahoma, 1993, p. 191
14. Joseph Head sy SL Cranston: Reincarnation, Anthology iray Atsinanana-Atsinanana, Ny trano famoahana Theosophical, 1961, p. 39